दुइचोटि मृगौला फेरेको ओली, मानसिक रुपमै अस्वस्थ्यको शंका गर्दै आयो अधिकारीको खुलापत्र – Sanghiya Online
Posted on : April 11, 2020 - No Comment
हामी जनता सन्चै छौ । हजुरको बुढो शरीर तेहि माथी दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नु भयो। शारीरिक रुपतमा त कमजोर नै हुनुहुन्छ तर मानसिक रुपमा पनि स्वास्थ्य हुनुहुन्न कि भन्ने शंका लाग्दैछ । विभिन्न तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दै छ कि पटक पटक बोलेका कुरा फरक छ्न ।
राष्ट्रका नामना सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनमा केवल आक्रोश मात्र थियो। बिपक्षी प्रतिपक्षी मिडिया र अन्लाईनहरुलाई बनाउनु भयो। तपाइले भन्नुभयो – “म १४ बर्ष एकान्तबास बसे । क्वारेन्टाइनलाई जेल जीवन संग तुलना गर्नुभयो ।” के जनतालाई नि जेल राखेको होर हो ? जनताको के गल्ती छ ? कोरोना सरकारकै अकर्मण्यतामा कोरोना (कोभिड – १९) देश भित्रियको हो ।
बेलैमा सरकार सचेत भै दिएको भए नाकामा चेक जाँच अन्तराष्ट्रिय उडानहरु बन्द गरिदिएको भए नेपाली जनता सुरक्षित हुने थियो । कोरोनाको हल्ला हुन साथ् जो जहा छ त्यहि बसोस भन्दै नाकाहरु शिल गरिदिएको भए आज नेपाल मा एउटा पनि कोरोना संक्रमित फेला पर्दैनथियो होला ।
त्यस्तै हजुरका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचीवको पारा पनि उस्तै छ । बिबादास्पद निर्णय गर्ने, मजाक गर्ने, मात्रैका छ्न मौकामा चौका हान्ने मात्रैका प्राइभेट हस्पिटलको त के कुरा गर्नु हुंदाहुंदा रातदिन काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी प्रहरीकै तलब काट्ने कुराले त सबै नेपाली जनता दुखी छ्न । सांसदहरुलाई आसेपासेलाई खुसी पार्न बाडिएको ५ करोड फिर्ता गरे हुदैन ? सांसदहरू र मन्त्रीहरु कै तलब भत्ता ३० देखी ५० प्रतिशत कटौती गर्दा हुदैन ? ५/५ बर्ष खान्छ्न एक बर्षको कम खाँदा के चाहिँ बिग्रीहालला र ?
बिकास पछि गरौंला, पहिले बिनास बाट बचौं बिपत्तिबाट बचौं
गल्ती भए माफ पाउँ
(तत्कालिन संघिय समाजबादी फोरम नेपालबाट चुनाबमा समेत उठ्नु भएको उम्मेदवार तथा युवा नेता )